FBC - Naannoon Oromiyaa fi Somaalee murtoo sagalee ummataa 1997 hojiirra oolchuuf waliigalan
Naannoon Oromiyaa fi Somaalee murtoo sagalee ummataa 1997 hojiirra oolchuuf waliigalan
Finfinnee, Ebila 11,2009(FBC) – Naannoon Oromiyaa fi naannoon Somaalee Ityoophiyaa murtoo sagalee ummataa bara 1997 gaggeeffame guutumaa guututti hojiirra oolchuuf waliigalan.
Preezidaantonni naannolee lameenii waliigaltee murtoo ummataa gaggeeffame bu’uura taasifachuun, naannolee hin daangofne daangessuuf waliigalaniiru.
Ministirri Ministeera Federaalaa fi Misooma Horsiisee Bulaa obbo Kaasaa Taklabirihaan waliigalteen har’a mallatteeffame waldhabbii mudateen namoota lubbuu isaanii dhabaniif sanada waadaati jedhan.
Rakkoo nageenya daangaa naannoo lameenii hiikuufis bu'uura riifarandamii bara 1997 geggeeffameen daangaa gandoota 147 daangeesuudhaaf walii galteen mallateeffameera.
Kanaan dura gaaffiin abbummaa gama lameeniin irratti ka'e kan ture gandoota 420.Kanneenirrattis murtiin ummataa (rifarandamiin) gaggeeffamee, gandootni 360 Oromiyaa jalatti buluuf, gandootni 80 ammoo Somaalee jalatti buluu filataniit turan.
Waliigalteen har'a naannoleen lameen walii malklatteessanis qabxiilee 13 of keessaa qabu. Waliigaltee har'aatinis hojicha ji'oota 3 keessatti fixuun, daangaa bulchiinsaa ummataaf ibsuuf waadaa galaniiru.
Oduuwwan Biroo « Amanamtummaan mootummaa ummatasaafi -Muummee ministiraa Haaylamaariyaam	Preezdaant Al Siisiin biyyi isaanii dhimma keessoo Ityoophiyaa keessa akka hin galle ibsan »